Yenza i-Web 2.0 Logo yakho | Martech Zone
Yenza i-Web 2.0 Logo yakho
Kuhlekisa kakhulu. Yenza i-Web 2.0 Logo yakho lapha (UPDATE: Isiza asisatholakali). Ngithole lokhu kubhulogi likaPeter Glyman.
Amaphephandaba kumele acabange…
Leli yikhasi elilodwa elipholile futhi elihlekisayo. Futhi bane-design efanayo - i-webclock. Ishaya noma ikuphi okunye engikubonile (noma kunjalo angikaze ngiqonde ukuthi kungani omunye umuntu engathumela iwashi kuwebhusayithi yakhe…)
Sep 8, 2006 ku-9: 31 AM
Ngenze ama-2 alawo ma-blog kubhulogi lami futhi 😀
insizakalo ibonakala iphansi okwamanje, kepha nayi i-Web 2.0 generator bullshit ehlekisayo:
Futhi ubonile yini ukuthi u-Eric (hhayi noma yimuphi u-Eric, kodwa _the_ MyBlogLog Eric ubeye kusayithi lakho? Uyaduma!)
Martin, kuhle lokho!
U-Eric NORobert Scoble (weScobleizer) ngosuku olulodwa!
Izinto ziye zaba zimbi kakhulu, manje kunephutha elingu-404 kuphela. I-Bugger, njengoba nje benginombono omuhle impela lapho bengingawusebenzisa khona lowo mphumela.
Yebo, i-Intanethi is into ewuketshezi.
Siyabonga ngakho konke ukukhuthazwa - kuhlakaniphile ukuba nomthwalo womphakathi we-myBlog ekhasini lokuqala kuphela.